ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက် ဦးပွားဘုရားအနောက်မုဒ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ သော ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း(၁)လောင်း မှာ Covid19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ – Khit Thit Lann
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက် ဦးပွားဘုရားအနောက်မုဒ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ သော ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်း(၁)လောင်း မှာ Covid19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့
November 22, 2020 manang Celebrity 0
မန္တလေး နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်
သတိ သတိပြုကြပါ !!!!!!
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက်
ဦးပွားဘုရားအနောက်မုဒ်တွင် တွေ့ရှိခဲ့ သော
အနီးတဝိုက်ရပ်ကွက်များဖြစ်သော ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက် ၊
တမ္ပဝတီရပ်ကွက်များရှိ မိဘပြည်သူများ အထူးသတိပြုပါရန်..
ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ် ဦးပွားဘုရားအနီး ကော်ရှူ ခလေးတယောက် သေဆုံး….
Swab ယူစစ်ဆေးကြည့်မှုအရ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ကြောင်းသိရ….
မႏၲေလး ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္
သတိ သတိျပဳၾကပါ !!!!!!
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ကြၽန္းလုံးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္
ဦးပြားဘုရားအေနာက္မုဒ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ ေသာ
အနီးတဝိုက္ရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြၽန္းလုံးဥေသွ်ာင္ရပ္ကြက္ ၊
တမၸဝတီရပ္ကြက္မ်ားရွိ မိဘျပည္သူမ်ား အထူးသတိျပဳပါရန္..
ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးပြားဘုရားအနီး ေကာ္ရႉ ခေလးတေယာက္ ေသဆုံး….
Swab ယူစစ္ေဆးၾကည့္မႈအရ ကိုဗစ္ပိုးေတြ႕ေၾကာင္းသိရ….